बच्चाहरु संग अपराध को लागी आराम, बच्चाहरु संग मनोरन्जन को लागी 2021 होटल मा मूल्य
पार्क होटल "रियो" - बच्चाहरूको साथ मनोरन्जनका लागि सर्वश्रेष्ठ होटल
ग्रीष्भेक्वका किशोर-किशोरीहरूको साथ सक्रिय विश्रामहरू
हामी समक्ष सम्पूर्ण परिवार आउनुहोस् - तपाईं यसलाई मन पराउनुहुनेछ!
कसरी प्राप्त गर्ने
क्लियनमा डेमनमा छुट्टीमा तपाईंको छुट्टी खर्च गर्ने योजना? हामी विश्वस्त छौं कि पार्क होटेल "रियो" - समुद्र द्वारा पारिवारिक छुट्टीको लागि अद्भुत विकल्प! र हामी अब मलाई किन भन्नेछौं :)
<< p> तपाईं AZOV को समुद्रमा मा खर्च गरिएको छुट्टिहरुमा छुट्टीको बारेमा निश्चित हुन सक्नुहुन्छ, धेरै समयका लागि सम्झना हुनेछ! यो अधिक हुनेछ - हामीसँग ठूलो बलौटे समुद्र तट छ, वयस्कहरू र बच्चाहरूको लागि धेरै मनोरन्जन, आरामदायक कोठा र उच्च स्तरको सेवा।
हामी विश्वस्त छौं कि पारिवारिक छुट्टीको तुलनामा क्याम्पललाई कुनै मायालु सम्झना हुँदैन जब आमाबुवाहरूले आफ्ना बच्चाहरूसँग मिलेर काम गर्छन्। एउटा सानो बच्चाले महसुस गर्ने गर्मीका सम्झनाहरूले उसको हृदयलाई आफ्नो सारा जीवनलाई न्यानो पार्नेछ।
त्यो हाम्रो नियमित पाहुनाहरूले हामीलाई बताउँदछन्। हामी पूर्ण रूपमा बुझ्दछौं कि अपराधको होटेल छनौट गर्दा, यात्रीहरू पक्का हुन चाहन्छन् कि बाँकीहरू आराम, आरामदायक, लापरवाह, लापरवाह र हंसमुख हुनेछन्। पार्क होटेलमा "रियो" यसका लागि सबै सर्तहरू छन्:
प्राय: परिवार होटेलमा, प्रस्तावहरू केवल युवा पाहुनाहरूमा सीमित छन्। तर हाम्रो मामला मा छैन! पिकअली किशोर किशोरीहरूले पनि हाम्रो होटेलमा केहि भेट्टाउनेछन्। हामी सक्रिय साहसिकहरूमध्ये धेरै भिन्नताहरू प्रदान गर्दछौं ताकि हामीसँग गर्मी 2021, हामीसँग कुनै उमेरका पाहुनाहरूको लागि उज्यालो र यादगार थिए।
यहाँ पुग्न, तपाइँ पार्क गाउँमा जान आवश्यक छ। यो तपाईंको उपस्थितिलाई प्रभावित देखिन्छ: तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि तपाईं रसियामा हुनुहुन्न, तर इजिप्ट रिसोर्टमा। त्यहाँ एक निजी समुद्र तट छ, र एक राम्रो डिजाइनर नजिकैको क्षेत्र को सुधार मा काम गरीन्छ। समुद्री तट छुट्टीको अतिरिक्त, त्यहाँ अन्य मनोरन्जनको ठूलो चयन छ।
यदि समुद्र आँधी छ भने, वा पानीको तापक्रमको लागि उपयुक्त छैन, तपाईं नुन पानी पोखरीमा पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ, सूर्य लाउन्जरमा घाम लाग्न सक्छ। त्यहाँ इनडोर पोखरी पनि छ जुन वर्षभरमा काम गर्दछ, सिमुलेटरहरू, सिमुलेटरहरू, विभिन्न आकारको खेल खेतहरू, अदालत। स्टक स्टक मा मेशिनहरूका लागि रक्षकको पार्किंगमा, र इलाकाभरि त्यहाँ वाइस-फाई हो।
शंका छैन, पाहुनाहरूले स्पा-सिकनबाट आनन्द लिनेछन् र भ्रमण गर्दछ जहाँ तिनीहरूलाई आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरेर कार्यविधिहरू पारित गर्न भनिन्छ। एक तातो सौना र हम्ममा खोलियो, कुशल मालिशहरू काम गर्छन्। रेस्टुरेन्टहरूमा तपाईं खानाको पछाडि बस्न सक्नुहुन्छ, कालो सागरको पानोमाको प्रशंसा गर्दै।
ब्रेकफास्ट बफेट ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ। खाजा र डिनरका लागि, युरोपियन गीशिन र उच्च गुणस्तरको वास्तविक अजान दाखमद्यको साथ साथै उच्च गुणस्तरको दाखमद्य। साना पर्यटकहरूको लागि, बच्चाहरूको क्लब खोलियो।
drabrail यात्री यात्रीहरु लाई पहिलो नजरमाथि विजय हासिल गर्न सक्षम छ। आश्चर्यजनक प्रकृति र प्रायद्वीपको ऐतिहासिक सम्पदाले निष्क्रिय मनोरन्जन र पर्यटकहरूको प्रेमीहरूलाई प्रेषित गर्दछ जो विगत शताब्दीहरूको रहस्यहरू छुन्छ।
रिसोर्टले राजसी मैदान, अवैध मैदान, बाक्लो श्रद्धान्तिक वनहरू द्वारा प्रहार गरिरहेको छ। बायाँ सोभियत समयको प्रदर्शित वातावरणको अन्त्य नभएसम्म यो डराउँदैन, तर त्यहाँ केही रंगहरू छन्, जहाँ अरूले सबैभन्दा नयाँ भवनहरू र शहरी सडकहरूको आकर्षण देख्नेछ, मानौं अभिभावक कार्डबाट। देशको नक्सामा, यो सायद एक मात्र कुना हो जहाँ पुरानो र नयाँ यति सामञ्जस्यपूर्ण देखिन्छ।
proinstuth शाही समय को लागी एक मनपर्ने रिसोर्ट भयो। यहाँ हामी फोक्सोको उपचार गर्न गयौं र खुट्टामा बिरामी बच्चाहरूलाई हुर्काउन गयौं। हो, र अब अस्पताल ग्रहहरूको खेलाडीहरू पनि चमत्कारहरू सिर्जना गर्दैछन्, त्यसैले प्रत्येक वर्ष सयौं डेक्सरहरू जीवन हावाको हतियारमा पुगेका छन् जुन एक इलेक्ट्रीशियनसँग मिल्दोजुल्दो छ, समुद्री तट र वैवाहिक तेलहरू समावेश गर्दछ।
पूर्ण रूपमा सबै वर्षमा आराम गर्नुहोस्। न्यानो शीतलहरु भ्रमण गर्न आमन्त्रित गरिन्छ - स्कोच गर्म सूर्य अन्तर्गत को अन्तर को अधिकतम संख्याले काम गर्दैन। जुन, जून को शुरुआतसहित समुद्रमात्र सेप्टेम्बरको अन्त्य सम्म जीवनको लागि जीवित छ। अक्टूबर दिवस मा विशेष क्रिस्प्स जारी राख्नुहोस्।
प्राय: प्रायद्वीपको ट्रेडिंग पूर्वाधारको व्यापारिक पूर्वाधार बढ्दै जान्छ, किनमेल केन्द्रहरू बढ्दै गइरहेको छ, प्रत्येक शहरमा, फार्मेसीहरू र क्याफेजहरू, रेस्टुरेन्टहरू र क्याफेक्टहरू परीक्षण गरिन्छ स्वादिष्ट स्वाद, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, उच्च-गुणवत्ता पकाएको भाँडा। होटलहरू पनि बाहिरी भागमा वा comnoisisseur मा अवस्थित मिनी बजार र पोइन्टहरू छन् जहाँ तपाईं घडी वरिपरि औषधी किन्न सक्नुहुन्छ।
प्राय: प्राय: धेरै तरीकाले जाँदैछन्। सिनिफोपोलको लागि हवाईजहाजमा, र त्यहाँ पहिले नै बस वा ट्याक्सीमा रिसोर्टहरूमा। सडकले आगमन बिन्दुमा निर्भर गर्दै दुई घण्टामा निर्भर गर्दछ। तपाईं ट्रेसोसोडरको बस्तीमा ट्रेन पुग्न सक्नुहुनेछ, र बसमा। एन्पाटा र केही रिसोर्टहरू बीच, फेडोया, उदाहरणका लागि, समुद्री क्याटमेरानमा चल्दछन् - तीन घण्टा र ठाउँमा। ठिक छ, प्रायश्चितको वरिपरि र पार गर्न चाहनेहरूको लागि सबैभन्दा सफल विकल्प, - आफ्नै कारको यात्रामा जानुहोस्।
आदर्श क्युस्टियाको पश्चिमी तटमा फैलियो। यो प्राय: बालुवा र समुद्रमा आरामदायी दृष्टिकोण हो। पारिवारिक पर्यटकहरूले आराम, साक्सी, घाम र बत्ती गाउँहरू छनौट गर्छन्।
दक्षिणी तट (, पहाडहरू - हिल्स - हिमाली भूभागमा, समुद्री तटमा जानुहोस् कहिलेकाँहि सजिलो हुन्छ। किनारहरू प्रायः ढुb्गाले ढाकिन्छन्, पानीमा अवसर धेरै गाह्रो हुन्छ, निश्चित जुत्ताहरू आवश्यक पर्दैन। पानी यहाँ सधैं थोरै चिसो हुन्छ जहाँ पानीमुनि बग्दछ।
पूर्वी किनार (,) मिश्रित बेचहरूको लागि मिश्रित समुद्रतताका लागि प्रसिद्ध छ: कतै मूर्तिहरू, कतै बालुवाको नजिक छ।
क्रिभायमा बच्चाहरुसंग छुट्टिहरु जीवनको जीवन्त छाप हुनेछ। बिभिन्न शहरहरूमा - तपाईंको आफ्नै गैर-टुक्रा फुर्सतको लागि सेट। त्यहाँ पानी पार्क, डल्फिनरीहरू, एक्लोरियमहरू, तीन्टाइम पार्क र चन्द्र पार्कहरू छन्।
गर्मीको गर्वमा बच्चाहरुका बच्चाहरु संग गर्मी छुट्टी मा जाँदै, तपाईं यो यात्रा चाखलाग्दो बन्न चाहान्छ कि बच्चाहरु केवल तपाइँको बच्चाहरु को लागी मात्र छैन।
<< p> प्रिय (सेवास्टपल) मा हाम्रो पेन्सन को टीम 2021 मा पाहुनाहरु संग आराम गर्न को लागी सबै पालो को लागी हेरचाह गर्न को लागी धेरै पाहुनाहरु को लागी छ।
तर यसले त्यस्ता चेतावनीको लागि तयारी गरिरहेको छ। त्यसकारण हामीले आमाबाबुको लागि यस्तो "जानकारी धोखा पाना" विकास गरेका छौं।
यदि "परिवारको काउन्सिल" बिदामा जान निर्णय गरे, एक महिना निर्धारण गरिएको थियो, अवधि, तपाईं मात्र उपयुक्तको छनौटको लागि उत्तम होटलहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ ।
प्लेसमेन्ट साइटको साथ निर्धारण गर्दै हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं व्यावहारिक मुद्दाहरूको सूची बनाउँदछन् र बच्चाहरूसँग ग्रीष्मकालीन पारिवारिक बिदाको योजना बनाउनु आवश्यक छ। र यो हाम्रो अभिभावकको लागि दोस्रो सिफारिश हो। यस मार्गलाई आमाबाबुको लागि सहज पार्न, हामी क्रिभायमा बच्चाहरूसँग राम्रो विश्राम गर्ने हाइलाइटहरूलाई विचार गर्न प्रस्ताव गर्दछौं।
कागजातहरू: तपाईंले अनलाइन कागजातहरूको ख्याल राख्नु पर्छ: जन्म प्रमाणपत्र (यदि 1 years बर्षको उमेर, यदि बच्चा 1 14 बर्षको भयो भने, बीमा नीति।
एक मुख्य कारकहरूले परिवारसँगको परिवारका बिदाको लागि होटेलको विकल्पलाई बच्चाहरूसँगको सहज समुद्री तटमा मानिन्छ।
dragria को अपराधको अन्य बेन्चहरू जुन उनीहरूको लम्बाई (लगभग 1.5 किलोमिटर) र चौडाइमा फरक हुन्छ, एकै समयमा समुद्री किनारमा मिश्रित संरचना हुन्छ। ढुb्गा र बालुवा तटीय पट्टिहरू द्वारा एक आपसमा सम्बन्ध विन्टर छन्। यो खेल र फुर्सतको बच्चाहरूको लागि धेरै सुविधाजनक छ। यहाँ समुद्री यात्रा अल्गाईबाट रहित छ, र यो समुद्री नुहाउन को सबै प्रशंसक को लागी एक ठूलो प्लस छ। समुद्र तटको क्षेत्र सुसज्जित छ र नियमित रूपमा हटाइएको छ।
बच्चाको पूर्वाधार। छुट्टी मा तपाईं बच्चाहरूलाई मात्र होइन, तर वयस्कहरू पनि रमाइलो गर्न चाहानुहुन्छ। यसैले हामीले ताजा हावामा बच्चाहरूको मनोरन्जनको बारेमा सोचे। पेन्सन "बलौटे बीच" छ स्लाइडहरूको साथ एक सुरक्षित बच्चाको खेल मैदान छ, जुन छायादार ठाउँमा छ र कभर छ। अर्को सानो मञ्च मैदानको द्रुत वरपर छ।
<< p> यो हाम्रो होटेलको क्षेत्रले अर्बर्स र कानून र राम्ररी परिदृश्यहरूको साथ हरियो क्षेत्रहरूको उपस्थिति समावेश गर्दछ। रमाईलो ल्यान्डस्केप र शुद्ध समुद्रको हावा - हजकी र अपराधमा बच्चाहरूसँग आराम गर्न के राम्रो हुन सक्छ?